Margarine: ပြန့်ပွား, မုန့်ဖုတ်နှင့်ချက်ပြုတ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပြန့်ပွားသည်။ ၎င်းကိုမူလက ၁၈၆၉ တွင်ပြင်သစ်တွင်ဟီပိုပိုတီမက် - မူရီယာစ်ကထောပတ်အစားထိုးအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Margarine ကိုအဓိကအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (သို့မဟုတ်) သန့်စင်ထားသောအပင်ဆီနှင့်ရေတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထောပတ်ဟာအဆီကနေပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး ...
Can-line ကိုဖွဲ့စည်း 2018-ဖွဲ့စည်း
မှိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဒေသခံသင်တန်းများအတွက်လမ်းညွှန်မှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရှင် ၄ ဦး ကိုစေလွှတ်သည်။ စည်သွပ်ဘူးကိုထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အရဖောက်သည်များ၏စက်ရုံသို့နည်းပညာရှင်သုံး ဦး စေလွှတ်ခဲ့သည်။
စည်သွတ်ဘူးနို့အမှုန့်နှင့်ဘူးသီးနို့အမှုန့်, ​​သာ။ ကောင်း၏?
နိဒါန်း - ယေဘုယျအားဖြင့်နို့မှုန့်နို့မှုန့်ကိုဘူးခွံများတွင်ထုပ်သည်။ သေတ္တာများ (သို့မဟုတ်အိတ်များ) တွင်နို့မှုန့်အထုပ်များစွာရှိသည်။ နို့စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဘူးခွံများသေတ္တာများထက်အများကြီးပိုစျေးကြီးတယ်။ ခြားနားချက်ကဘာလဲ ငါယုံကြည်သည်များစွာသောအရောင်းနှင့်စားသုံးသူတစ် ဦး ...
Butter နဲ့ Margarine ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
မာဂျင်းသည်အရသာနှင့်အသွင်အပြင်နှင့်ထောပတ်နှင့်ဆင်တူသော်လည်းကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိသည်။ Margarine ကိုထောပတ်အစားထိုးအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုရောက်သောအခါထောပတ်သည်ပြည်တော်၌နေထိုင်သောလူတို့၏အစားအစာတွင်အဓိကကျသောအရာဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ လွိုင် ...
Margarine: ပြန့်ပွား, မုန့်ဖုတ်နှင့်ချက်ပြုတ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပြန့်ပွားသည်။ ၎င်းကိုမူလက ၁၈၆၉ တွင်ပြင်သစ်တွင်ဟီပိုပိုတီမက် - မူရီယာစ်ကထောပတ်အစားထိုးအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Margarine ကိုအဓိကအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင် (သို့မဟုတ်) သန့်စင်ထားသောအပင်ဆီနှင့်ရေတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထောပတ်သည်နို့မှအဆီဖြင့်ပြုလုပ်သော်လည်းမာဂျရီကို fr ...